Habeenkii Labaad Oo Madaafciic Laga Malqay Muqdisho & Laamaha Amaanka Oo Leh Waa Macmal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Habeenkii labaad ayaa xalay waxaa kusoo dhacaay madaafiic hoobiyaal ah, sidoo kale waxaa meelaha qaar ka dhacay qaraxyo loo adeegsaday bambaanooyin la tuuray.
Degmooyinka qaraxyada laga maqlay ayaa waxaa ka mid ah Xamarweyne, Hodon, Wadajir, Dharkenyley iyo meelo kale, qaraxyada ayaa ukaa hoobiyaal.
Gudoomiyaha degmada Xamar-weyne C/llaahi Sahal Gardhuub ayaa sheegay in madaaafiicda ku dhacday degmadiisa aysan geysan wax khasaare ah.
“Xamarweyne, waxaa kusoo dhacay dhowr madaaf, wax khasaare ah oo ay geysteenna ma arag kaddib baaritaanno aan sameynay,” ayuu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha degmada Xamar-weyne, C/llaahi Sahal Gardhuub.
Sidoo kale, guddoomiyeyaasha degmooyinka Xamar-jajab iyo Dharkeynley oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin khasaare ay madaafiicdaas xalay ka geysatay degmooyinka ay maamulaan.
Laamaha amaaanka Soomaaliya oo xalay howlo badan ka qabtay magaalada ayaa ka warbixiyey madaafiicdii xalay laga maqlay caasimadda waxeyna sheegeen in qaraxyadu ahaayeen kuwo macmal ah oo aan geysan wax khasaare ah.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya ahna Taliyaha guud ee Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Jen. Maxamed Cumar Madaale ayaa sheegay in baaritaan cilmi ay sameeyeen ay ku ogaadeen in waxyaabaha ka dhacay magaalada Muqdisho ay ahaayeen qaraxyo macmal ah, oo aan geysan wax khasaare ah.
“Baaritaanno aan sameynnay ayaan ku ogaannay in madaafiicdii Muqdisho lagu weeraray xalay ay ahaayeen kuwo macmal ah, mana jirto khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba ah oo ay geysteen, waxayna ahaayeen kuwo lagu cabsi-gelinayo shacabka Muqdisho,” ayuu yiri Col. Madaale.
Wuxuu sheegay Jen. Madaale in qaraxyadaan looga gol lahaa in lagu qalqaliyo dadka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Afhayeenka Booliska ayaa tilmaamay in ciidamada Boolisku ay gacanta ku dhigeen in ka badan 30 qof oo lagu tuhamayo inay ku lug lahaayeen qalqal gelinta caawa laga sameeyay magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in baaritaan lagu wado.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Jen. C/xakiin Dahir Saciid (Jen Saacid) ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ammaan tahay, isla markaana ciidamada ay xoojiyeen ammaanka xaafadaha Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in walxaha ay u adeegsadeen falkaan ay yihiin kuwa aan wax saameyn ah ku yeelan dadka iyo xitaa dhulka ama dhismayaasha, caddaaladdana la hor keeni doono kuwii ka dambeeyay falkaasi qal-qalgilinta ah.
Xalay fiidkii ayaa madaafiic laga maqlay Muqdisho, iyadoio habeen horana sidaas oo kale loo maqlay, waxeyna arrintaan la yaab ku boqotay dadka Muqdisho oo dhawaanahan aan maqlin madaafiic dhaceysa xilli lasoo jeedo, iyadoo xilliyadii hore madaafiicda la maqli jiray waqtiyda saqda dhexe ee habeenkii la hurdo.
Somaliland administration ban TV station over alleged “insults” against president